MY REMEMBRANCE: 2007
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် အင်္ဂလိပ်လိုဆိုထားတဲ့ သီချင်းပါ။ ကျတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကပေးတာပါ။ သူဘယ်က ရှာဖွေထားလဲမသိပါ။ စိုင်းစိုင်း crazy တွေကူးနိုင်အောင်တင် ပေးထားပါတယ်။ မူရင်း first lady ရဲ့ baby I love u လား။ Never baby replace လား ကျတော်မသိပါ။ စိုင်းစိုင်း က featuring လုပ်ထားတာပါ။ အားလုံးယူနိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်သူတွေက ဖြုတ်ခိုင်းရင်တော့ ဖျက်ပေးပါမယ်။ download ယူရန်
Posted by puluque at Thursday, December 20, 20070comments Links to this post
Phyuu Saya Taw ta Ya
ပဲခူးမြို့ သာမဏေကျော်စာသင်တိုက် မှာ ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ ဟောကြားတော်မူသော သရဏဂုံရှင်းတမ်းတရားတော်ပါ။ ကထိန်အထူးတရားပွဲပါ။ ကျတော်ချုံ့ထားပါတယ်။ download ချပြီးနားယူနိုင်ပါတယ်။ ကျတော်ဒီအခွေထွက် တယ်ဆိုတာ ကြားကတည်းကရှာနေတာပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရှာပေးတာပါ။
အခွေကူးပေးတဲ့ ရှာဖွေပေးတဲ့ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပဲခူးမြို့ သာမဏေကျော်စာသင်တိုက် မှာ ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ ဟောကြားတော်မူသော သရဏဂုံရှင်းတမ်းတရားတော်ပါ။ ကထိန်အထူးတရားပွဲပါ။ ကျတော်ချုံ့ထားပါတယ်။ download ချပြီးနားယူနိုင်ပါတယ်။ ကျတော်ဒီအခွေထွက် တယ်ဆိုတာ ကြားကတည်းကရှာနေတာပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရှာပေးတာပါ။ ကူးလို့ရပါပြီ။ ကျတော့ ညံဖျင်းမှုကြောင့်ပါ။ အခုနာယူနိုင်ပါပြီ
ပထမ တပိုင်း ကူရန်
ဒုတိယပိုင် ၂ ကူး၇န်
ဒုတိယပိုင်3ကူး၇န်
rel="tag"> dhamma tayataw
Posted by puluque at Tuesday, December 11, 20070comments Links to this post
သူငယ်ချင်းတယောက်ပြောတဲ့ စကားလေးပါ။ အဲဒီနေကမီး မလာဘူး။ သူကပြောတယ်။ မြန်မာ့ မီး မဟုတ်ဘူးတဲ။ မြင်မှ မီးတဲ။ မြင်မှ မီးရထားတဲ့။ မြင်မှပဲ မီးလာတယ်။ မြင်မှပဲ ရထားလာတယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာပေါနော်။။။
DSA, DSTA ကျောင်းဆင်းပွဲ
ဒီဇင်ဘာလရောက်ရင် ကျတော်တို့ဆီမှာ ပြင်ဦးလွင်မှာ ပန်းပွဲတော်နှင့် အတူ DSA, DSTA ကျောင်းဆင်းပွဲ ရှိတာအားလုံးသိမယ်ထင်ပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေက ကျောင်းဆင်းပွဲကို နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဆိုတဲ့သူနဲ့အတူ သူရဲ့သားမြေးတီတွတ်ကျွတ်ဗြွတ် အကုန် ပြင်ဦးလွင်ကို အကုန် အေးဓါးမြတိုက်ဖို့(မှားလို့ shopping ထွက်ဖို့။ အပျော်ခရီထွက်) လာလေ့ရှိပါတယ်။ ကြားရတဲ့သီးတင်းကတော့ ဒီနှစ်မှာ ဘွားတော်ကြီးလည်းမလာနိုင်။ သားသမီး ၅ ယောက်မှာ ၂ယောက်ပဲ ပါလာမယ်လို့သတင်းရပါတယ်။ ဒီသတင်းကြားရင်တော့ ပြင်ဦးလွင်က ဆိုင်တွေတော်တော်စိတ်ညစ်မှာ ကျိမ်းသေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့လာရင် shopping ထွက်တယ်ဆို ပြီး တွေသမျှဆိုင်ဝင်ကာ တွေသမျှပစ္စည်းဆွဲယူတော့ ပါတယ်(သူတို့ ၀ယ်တာမဟုတ်ဘူးနော် တိုင်းက ပ်ုက်ဆံလိုက်ရှင်းရတာ) ။သမီး ၂ယောက် ပဲဆိုတော့ တော်တော်နည်းသွားတာပေါ့။
DSA ကျောင်းဆင်းပြီးရင်း ပုဂံ ဘုရားဖူးသွားမှာပါ။ နောက်တစ်ပတ်ကြာရင် DSTA ကျောင်ဆင်းပွဲပါ။
Posted by puluque at Monday, December 10, 20070comments Links to this post
အခုလို ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ ကျတော်လည်းအများနည်းတူ နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူး။ ကျတော်ဖြစ်တက်တာက လည်ချောင်းနာတက်တာပဲ။ ရေခဲရေတို့၊ အအေးတို့ သိပ်မသောက်လို့ မရဘူး။ သောက်လိုက်တာနဲ့ လည်ချောင်းနာကော။ ကျတော်က ကော်ဖီမစ်၊ တီမစ်၊ လက်ဖက်ရည်၊ကော်ဖီ လုံးဝမသောက်။ အအေးပဲကြိုက်တယ်။ လည်ချောင်းနာနဲ အအေး အမြဲဒွန်တွဲနေတော့ strepsils အမြဲလိုလိုဆောင်ထားကတယ်။
ကျတော် လည်ချောင်းနာရင် ကျတော့ ၉တန်း။ ၁၀ တန်းတုန်းက တီချယ်ကို သတိရတယ်။ တီချယ်နာမည်က ဒေါ်မြမာလာတဲ့။ အထက (၃) ပဲခူး (B.E.H.S (3) ,BAGO)ကပါ။ဒါပေမဲ့ ကျတော်တို့ကတော ချယ်ကြီး လို့ပဲခေါ်တယ်။ ကျတော် အခုလို လည်ချောင်းနာရင် vitamin c ပါတာစားဖို့ အမြဲပြောတယ်။
ကျတော်အခုလို computer ကိုဝါသနာပါတာလည်း တီချယ်ကြီးကျေးဇူးတွေ ပါတယ်။ ကျတော်မှတ်မိတာက ကျတော် ၉တန်း တုန်းက တီချယ်ကြီးက physics သင်တယ်။ စာသင်ရင် စာရွက်လေးတွေကို ကွန်ပျူတာစာစီပြီးသင်တယ်။(သူကိုယ်တိုင် အဲဒီကတဲက ကွန်ပျူတာကျွမ်းနေပြီဗျ) တနေ့ ချယ်ကြီးက ဒီစာရွက်မှာ စာလုံးဒီဇိုင်(font) ဘယ်နှမျိုးပါလဲတဲ့။ ကျတော်လည်း သိသလောက်ပြောတာပေါ့။ တီချယ်ကြီက စာသင်ကောင်းရုံမဟုတ်ဘူးဗျ။ အချိန်ကို timing ကိုက်အောင်လုပ်တက်အောင် လည်းသင်းပေးတယ်။ ကျတော်တို့ကို စာတစ်ပုဒ်ရေးခိုင်းရင် ၅မိနစ်ကြာရင် နောက်တစ်ခါ ၄မိနစ်။ ၃မိနစ် နဲ့ပြီအောင်မောင်းတယ်ဗျာ။ ကျေဇူးတင်ပါတယ်တီချယ်။ နောက်မှဆက်ရေးတော့မယ်ဗျာ။
Posted by puluque at Wednesday, December 05, 20070comments Links to this post
မိုးကုန်တာနဲ့ မီးကတော့အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပျက်လိုက် လာလိုက်ပါပဲ။ကျတော်ရဲ့ အချိန်တော်တော်များများဟာ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိတော့ အခုလိုအချိန်မှာ ဘာလုပ်ရမလဲ။ အခုလောလောဆယ် ကျတော် ဆရာမောင်သာနိုးရေးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေပါတယ်။ ကျတော့အစီအစဉ်ကတော့ မီးမလာရင် စာအုပ်ဖတ်။ အနားယူ။ အင်တာနက်ဆိုင်သွား။ မီးလာတော့ကွန်ပျူတာသုံး အစဉ်ပြေနေမှာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတဲ့ဘက်က ကြည့်ရင် ကျေးဇူးတင်ဖို့တောင်ကောင်းသေးတယ်(MEPE) ကိုပါ။( ps. ကျတော်ဟာ ကွန်ပျူတာကို လေ့လာဆဲ တစ်ယောက်ပါ/ ဘာမှကောင်းကောင်းမတက်သေးပါဘူး)
Posted by puluque at Thursday, November 29, 20070comments Links to this post
တနေ့က သတင်းထဲမှာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းသင်ရိုးတွေ ဆက်ပြီးအဆင့် မြှင့်အုံးမယ်တဲ့။ ကျတော်သိသလောက် ကျတော်တို ၁၀တန်းတုန်းက တစ်ခါ (1998က) ။ နောက်တခါက 2001 လို့ထင်ပါတယ်။ အခုတခါ 2008-2009 ပညာသင်နှစ်က စမှာပါ။ သင်ရိုးသစ် တွေပြောင်းလဲ ဘာမှမထူးလာပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုပြောင်းတော့ကော ကျတော်တို့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီလာသလား။ ပိုနိပ်ကျလာသလားလို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ။
ကျတော့အထင် သင်နည်းစနစ်ပါ။ သင်နည်းစနစ်မပြောင်းသ၍ တိုးတက်လာဖို့ မရှိပါဘူး။ သင်နည်းစနစ်တွေကိုလည်း စမ်းတော့စမ်းနေကြတာပါပဲ။ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ကျတော်တို့ အင်္ဂလိပ်စာကို သူငယ်တန်းထဲကနေ သင်လာတာ ၁၀တန်းအောင် တစ်ယောက်ဆို ၁၁ နှစ်တိတိပါ။ အဲဒီ ၁၀တန်းအောင်တစ်ယောက် ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားကော ကောင်းကောင်းပြောတက်လား။ မပြောတက်ပါဘူး။ ကောင်းကောင်း ရေးတက်လား ဆိုတော့လည်း နိုးပါပဲ။
ကိုရီးယားတွေဟာ အင်္ဂလိပ်စာကို ရ တန်းရောက်မှသင်ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျတော်တို့ထက် ပြောတက်ရေးတက်ပါတယ်။ ဘာတွေမှားနေလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်။
ကျတော် blog ကိုpost အသစ်မတင်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီ။ ရေးစရာတွေကတော ရင်ထဲမှာ အပြည့်ပဲ။ဒါပေမဲ စာရေးတာကလည်း စိတ်လည်းပါအုံးမှ။ စိတ်ကလည်းကြည်အုံးမှ။ စာမရေးဖြစ်ပေမဲ့ ကျတော်နှစ်သက်တဲ့ ဘလော့တွေကိုတော ပုံမှန်ဖတ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ခုတလော ကျတော် ကွန်ပျူတာကို သိပ်မသုံးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ နည်းနည်းသုံးတာ ကြာသွားရင်မျက်ရိုးကိုက်လာတယ်။ မျက်မှန်တက်ကတောမယ်ထင်တယ်။ နောက်တချက်က မီး ကမလာလိုက်၊ပျက်လိုက်ဆိုတော့ ကျတော့စာရေးချိန်တွေ နည်းသထက်နည်းသွားပါတယ်။
Posted by puluque at Monday, November 19, 20070comments Links to this post
ဒီနေ့ ပဲခူးကနေ ရန်ကုန်ပြန်တော့ လမ်းမှာ ၃နေရာလောက် စစ်ဆေးရေးဂိတ် တွေမှာ ဆင်းရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ဖောက်ခွဲရေးသမားတွေ ဆင်းလာတာလို့ သတင်းရလို့တဲ့။ ခရီးသည်တင် ကားတော်တော်များများက ခရီးသည်တွေဆင်းရတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားလေးတွေကတော့ ဆင်းရတာမတွေဘူး။ သူတို့ ကဖောက်ခွဲရေးသမားတွေကို ကိုယ်ပိုင်ကားမစီးနိုင်ဘူးလို ထင်လို့ လားမသိပါ။ သူတို့အဘ ဖောက်ခွဲရေးသမားတွေက ကိုယ်ပိုင်ကားလေးနဲ့သွားတော့ကော ဘာတက်နိုင်မှာ မို့လဲ။ မှတ်ပုံတင်စစ်တာလည်းမဟုတ်။ လူရှာတာလည်းမဟုတ်။ လမ်းပဲဆင်းလျှောက်ခိုင်းနေတာ။
သူတို့ကြောင့်ကျတော်တို့မှာ ကားပေါ်က တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ ဇိမ်ပျက်တယ်ဗျာ။။
Posted by puluque at Thursday, September 06, 20070comments Links to this post
ကျတော် ခုတလော ကံတော်တော်ဆိုးနေ ပါလား။
ဟိုတစ်နေ့က ကျတော့် mp4 2GB ဟာ အားသွင်းထားတာ မီးပျက်သွားပြီး အရင်ရှိနေတဲ့ အားတွေပါအကုန်ကုန်သွားရော။ ကျတော်မသိပဲ ဖွင့်ကြည့်တော့ ရှောဖြစ်ပြီး ဘာမှတက်မလာတော့ဘူး။ ဒီတော့ အုံဖွ မန်းမှုတ် မဟုတ်ပေါင် အားပြန်သွင်းပြီး ကြည့်တော့ format ရိုက်ရမှာမို format ရိုက်တော အရင် ၂ဂစ် ဟာ ၁ဂစ်ပဲကျန်ပြီ ၁ဂစ်က ဂစ်သွားတယ်။ အရင်လည်း format အကြီမ်ကြိမ်ရိုက်နေကြပါ။ ခုမှ ဘာလိုဂစ်သွားလဲမသိပါ။
နောက်တနေ့ internetဆိုင်သွား။ ဘာညာကူးပြီး ထည့်မယ်ကြံတော့ mp4 အစုတ်လေးကိုစက်မှာတပ်တော့ စက်ကမသိ။ ဒီတစ်ခါတော့ ရှောပြီထင်နေတာ ။ဒါနဲ data တွေကို cd ခုတ်။ဟော အိမ်ရောက်တော့ စက်မှာတပ်တော့အကောင်း၊ ဒီတစ်ခါ player ကြောင့်မဟုတ်ပဲ ကြိုးကြောင့်ဖြစ်တာ။ အိမ်ကစက်မှာက ကြိုးတစ်ကြိုး။ အပြင်မှာသုံးဖို့က တစ်ကြိုး ။ အပြင်သွားရင်သုံးတဲ့ကြိုးက ပျက်ပြန်ကော။
မနေ့ညကကျတော့ ကျတော် computer အစုပ်လေးကိုဖွင့်ပြီး ပုံဆွဲ။ ပုံဆွဲနေတုန်းက အကောင်း။ ပုံတစ်ပုံပြီးတော့ ဘုရားရှိခိုး ၊ စက်ကိုမပိတ်လိုက်မိဘူး။ ဘုရားလည်းရှိခိုးပြီး ပုံထက်ဆွဲမယ်လုပ်တော့ စက်က ဟန်းသွား။ ဘာဖြစ်တာပါလိမ့်။ ပြန်ပြီ bootဆွဲတော့ window တက်မလာတော့ဘူး။ သွားပြီ hard disk။ ကွိ ကလိနဲ့ အသံတွေပေးနေတာ။
May last week လောက်က ကျတော့်သူငယ်ချင်းနဲ့ မနက်စာထမင်းကြော် စားနေတုန်းမှာ state ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့ သူငယ်တန်းတက်မဲ့ ကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်က ဆိုင်ရှင်ကို ကျောင်းအပ်တာ ဘယ်လောက်ကုန်သလဲလို့ မေးတာ ဆိုင်ရှင် က ကျောင်းအပ်ခ မပေးရပဲ ကြံခိုင်ရေးရယ်မိခင်နဲ့ကလေးရယ်က စာအုပ်ဖိုးဆိုပြီး ၅၀၀၀တောင်ပေးသေး ကြောင်းသူတို့ဟာသူတို့ ပြောနေကြတယ်။ ကျတော့်သူငယ်ချင်းက အဲဒီအသင်းတွေ နေရာတကာပါလာကြောင်း ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ကျတော်သူငယ်ချင်းကဆက်ပြောတယ်။ အညာဘက်က ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းတစ်ကျောင်း အလွန်အောင်မြင်ကြောင်း၊ ဆရာတော်ကလည်း ရွာကအလှူမခံပဲ ဆရာတော်တရားဟောလို့ရတဲ့ အလှူငွေနဲ့ အစစ အရာရာ ကုန်ကျခံတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို အောင်မြင်တော့ ကြံခိုင်ရေးအသင်းက ဆရာတော်ဆီလာပြီး သူတို့နဲ့ပူပေါင်းဖို့ဆွေးနွေးတယ်။ ကြံခိုင်ရေးအသင်းက ကြီးမှုး၍ ဆိုပြီး နာမည်ခံချင်တာပေါ့။ ဒါကိုဆရာတော်က လက်မခံလိုက်ဘူးလို့ ကြားတယ်လိုသူက ပြောပါတယ်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း အပါအဝင်အသင်း (၁၀) လောက်ကို သက်တမ်းပေးမတိုး တဲ့သတင်းကို blogတွေမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ကျတော်တို့ရဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ အသင်းလည်းပါပေါ့ ။ဘာကြောင်များ နာရေးကူညီမှု အသင်းလို အသင်းမျိုးကို ဖျက်သိမ်းခိုင်းတာလဲ ဆိုပြီးစဉ်းစာမိတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့လား။ ဘာညာပေါ့။
သိပ်မစဉ်းစာရပဲ ကျတော်ခေါင်းထဲ ရောက်လာတာကတော့ ကြံခိုင်ရေးရဲ့ ပရောဂမကင်းဘူးဆိုတာ ကိုပါ။ ကျတော်သူငယ်ချင်းပြောပြ တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းလို ပဲလိုထင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ကျတော်လည်း လက်လှမ်းမှီသလောက် ဂျာနယ်တွေလိုက်ဖက်တော့ ဘာကြောင့်ဆိုတာကို မတွေမီဘူး။ နာရေးကူညီမှုအသင်းနဲ့ ပက်သက်သူတွေနဲ့လည်း မရင်းနှီးတော့ ဘာသတင်းမှမကြားရဘူး။ နောက်တော့ ၁ နှစ်သက်တမ်းတိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဖက်လိုက်ရပါတယ်။
ဟော ခုတော့ကျတော်ထင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ တရားခံကိုတွေလိုက်ပါတယ်။ လျှပ်တပြတ်သတင်းဂျာနယ် ထဲမှာပါ။ ခုတော့ ကြံခိုင်ရေးက လည်းနာရေးကူညီမှုအသင်း လိုက်ထောင်တာကို တွေ့၇တော့ ကျတော်အထင်မှန်နေပြီဆိုတာတွေ့ ရပါတယ်။ ကျတော်ထင်သလို နာရေးကူညီမှုကို ကြံခိုင်ရေးထဲ သိမ်းသွင်းတာ နာရေးကူညီမှုအသင်းက လက်မခံတော့ အသင်းကိုသက်တမ်းမတိုးပေးပဲ ပိတ်ခိုင်းတာပါ။
ဘယ်အသင်းက လိုအပ်နေသူတွေအတွက် အကျိုးပြုမလဲဆိုတာ အချိန်က အဆုံးအဖြတ်ပေးပါလိမ်မယ်။ ကျော်သူတို့ရဲ့ အသင်းကတော့ ကိုယ်ကျိုးလုံးဝမပါပဲ ဆောင်ရွက်နေတာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးအသိပါ။ အခွင့်အရေးကို မျှော်ကိုးပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အသင်းသားတွေရဲ့ အသင်းကတော့ ဘယ်လောက်ခံမလဲ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။။။
သမ္မတ အိမ်တော်က ထွက်ခွာချိန်မှာ ယူသွားစရာဆိုလို့ ကျတော်ကိုယ်ပိုင်သေတ္တာနှစ်လုံးပဲရှိတဲ့ Indian President
“ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ ဘာလက်ဆောင်ကိုမှလက်မခံပါနဲ့။ တန်ဖိုးမြင့်မားတဲ့စနစ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုတွေနဲ့ မိသားစုဘ၀ကိုတည်ဆောက်ပါ၊” အိန္ဒိယ သမ္မတကြီးရဲ့စကားတွေပါ။ ကျတော်တို့ဆီက လူကြီးတွေနဲ့များကွာပါ့။ ဆီနဲ့ရေလိုပါပဲ။ ကျတော်တို့ဆီမှာတော့ မြေးမွေးနေ့ပွဲ လုပ်တာ ဘာလက်ဆောင်မှမပို့လို ပြုတ်သွားရှာတဲ့ DSA ကျောင်းအုပ်ကြီး။ မင်္ဂလာဆောင်မှာ ဆင်တဲ့ ပန်းဖိုးတောင်းမိလို့မတရားအခွန် သိန်း(၁၀၀)ကျော် ပေးလိုက်ရတဲ့ ပန်းအလှဆင်လုပ်ငန်းတွေ ။ စတဲ့ စတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ တော့ အတော်ကွာပါတယ်။
အသက် ၇၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် သမ္မတကြီးအဗ္ဗဒူကလမ်က မိမိဖခင်သည် မိမိအား မည်သည်လက်ဆောင်မျှမယူရန် သင်ကြားထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျတော်တို့ဆီက ရွှေမျိုး ရွှေနွယ် သန်းမျိုးသန်းနွယ်တွေရဲ့ အဖေတွေ၊ အဖိုးတွေကတော့ အဲဒီလိုမသင်ခဲ့ဘူးနဲ့တူပါတယ်။ လပြည့်တို့ ၊ လကွယ်တို့ ရေ “ ရတုန်းများများယူထား”ဆိုတာ တွေ ပဲသင်ပေးထားတယ်နဲ့တူပါတယ်။
Ref; weekly eleven
Posted by puluque at Thursday, August 09, 20070comments Links to this post
၁။ အလုပ်လက်မဲ့ မရှိ၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ အလုပ်မလုပ်။
၂။ ဘယ်သူမှ အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် စီမံကိန်းလျာထားချက် အမြဲတမ်းပြည့်မီတယ်။
၃။ စီမံကိန်းလျာထားချက် အမြဲတမ်းပြည့်မီတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်မှာဘာမှမရှိဘူး။
၄။ ဆိုင်မှာဘာမှမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် တန်းစီနေကြတာ အရှည်ကြီး။
၅။ နေရာတကာမှာ တန်းတွေအရှည်ကြီး။ ဒါပေမယ့် ပြောတော့ ပဒေသာပင် ခေတ်ရောက်ဘို့ နီးနေပြီတဲ့။
၆။ ပဒေသာပင် ခေတ်ရောက်ဘို့ နီးနေပြီတဲ့။ ဒါပေမယ် ဘယ်သူမှ မကျေနပ်ကြဘူး။
ရ။ ဘယ်သူမှ မကျေနပ်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် အားလုံးထောက်ခံမဲပေးကြတယ်။
Posted by puluque at Thursday, August 09, 20072comments Links to this post
B.E.H.S (3) ,Bago
ဒီနှစ်ဆယ်တန်း အောင်စာရင်းထွက်တော့ ကျတော်တို့ အမှတ်(၃). ပဲခူးရဲ့အောင်ချက်က ပဲခူးခရိုင်ထဲမှာ အမြင့်ဆုံးပါ။ ၅ ဘာသာ ၆ယောက်။ ၄ဘာသာ ၁၅ယောက်၊
၃ ဘာသာ ၂၁ယောက်။ ၂ဘာသာ ၂၀ယောက်။ ၁ဘာသာ ၂၈ ယောက်။ ၆၃၅ ဦးဝင်ဖြေတာ ၃၇၂ယောက်အောင်ပါတယ်။
ဂုဏ်ထူးရှင်တွေကို ကြည်ပြီးဘာထူးခြားလဲဆိုတာတွေ့မယ် ထင်ပါတယ်။ဘာသာစုံ all D တစ်ယောက်မှမပါတာကိုပါ။ ကျတော်တို့ဆီမှာ ဘာသာဆုံထွက်အောင် မသင်နိုင်တော့ဘူးလား လို့တွေးစ၇ာရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ထိပ်တန်းကျောင်းဖြစ်ပြီ all D တောင်မပါဘူးလားလို့ အပြင်းပန်းကြည့်ရင်ကဲ့ရဲ့စရာပါ။ ကျတော်ကျောင်းရဲ့အဖြစ်ကို ကျတော်တွေပဲသိကြပါတယ် ။ all D ထွက်တဲသူ အများစု ဟာ ဆေးတက္ကသိုလ် တက်ကြမှာပါ။
ဘာဖြစ်လို့ all D မထွက်တာလဲဆိုတာ ကတော့
ကျတော်တို့ ပဲခူးဟာ ရန်ကုန်နဲ့ဆို ကားစီးရင် ၁နာရီခွဲလောက်ပဲမောင်းကပါတယ်။
ရုံးတက်၊ ကျောင်းတက်မယ် ဆိုရင်နေချင်းပြန်တက်နေသူတွေ အများကြီးပါ။ ကားတွေက လည်းပေါပါတယ်။
မကွေးဆိုတာက ရန်ကုန်ကနေသွားရင်တောင်မိုင် 300 နီးပါးဝေးမှာပါ။ ပဲခူးနဲ့ ရန်ကုန်က မိုင် ၅၀။ ပဲခူးကနေ မကွေးကိုသွားရင် ရန်ကုန်ကနေသွား၇တော့ စုစုပေါင်းမိုင် 350 လောက်ဝေးပါတယ်။ အချိန်တွေကုန် ငွေတွေကုန်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ၈တန်း။ ၉တန်း မှာ ထူးချွန်တော်တော်များများ ရန်ကုန်ပြောင်းကုန်ကြတော့ ကျောင်းက ငုတ်တုပ်မေ့တာပေါ့။ ပြောင်းသွားတဲ့သူတွေ ကိုလဲအပြစ်ပြောလိုမရပါဘူး။ ဘယ်သူမဆိုရန်ကုန်နဲ့ မကွေးဘယ်မှာနေမလဲ။ မကွေးသားများကို မပြောပါ။ မိဘတွေ အနေနဲ့လည်း ၁နာရီလောက်ကားစီးရင်ရောက် တဲ့နေရာနဲ့ နာရီ၁၂နာရီလောက်စီးမှ ရောက်တဲ့နေရာ ဘယ်မှာထားမှာလဲ။
အဲ့ဒီလို နဲ့ ဦနှောက်မရှိတဲ့လူတွေ လုပ်သမျှကို ကျောင်းနဲ့ကျောင်းသား။ မိဘတွေခံကြရတာပေါ့လေ……။
Posted by puluque at Saturday, August 04, 20070comments Links to this post
ကျတော်တို့ ဆီမှာ ဒီစကားလုံးဟာ မဆလခေတ် ကုန်ဆုံးပြီးနောက် သေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ လို့ ကျတော်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ မဆလခေတ် တလျှောက်လုံးမှာ တပ်မတော် ဟာ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းသူတွေကို အချိန်တော်တော်ကြာတိုက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းက စစ်အသုံးစရိတ်ဟာ 40%လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေတော်တော်များများ ဟာ တပ်မတော်သားတွေက်ို တွေ့ရင်သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆှိုိကြ ချစ်ခင်ကြပါတယ်။
မဆလခေတ်ကုန်တော့ အခြေအနေတွေပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ န၀တ လက်ထက်မှာ ပိုဆိုးလာတယ်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အမည်ခံ စစ်သားတွေဟာနေရာတကာ ခြေ ရှုပ်လာပါတယ်။ စီးပွားရေးအစ ၊ လူမှုရေးအလယ် နိုင်ငံရေးအဆုံး သူတို့ဟာ သြဇာ အာဏာ ပြလာပါတော့တယ်။ ပြည်သူတွေဟာ အခြေအနေ အရသာ သူတို့ကိုဆက်ဆံနေရပေမဲ ဘယ်သူမှမကျေနပ်ကျ ပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်းနဲ အမုန်းတရားတွေပွားလာပါတယ်။
စစ်ထောက်လှမ်းရေး ပြိုကျသွားတော့ ခေါင်းထောင်လာတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တချို့ကြောင့် ပိုဆိုးလာတယ်ထင်ပါတယ်။ အမုန်းတရားတွေဟာ မပေါက်ကွဲသေးခင်မှာ သူတို့ ဟာ သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုပြင်ပြီး ပြည်သူချစ်သော တပ်မတော် ဖြစ်အောင်နေထိုင်သင်တယ် လို့ထင်ပါတယ်။
ကဗျာ နောက် တစ်ပုဒ်
ဒီကဗျာလေး ကလည်း အရင်ကဗျာလိုပဲ သူများစာအုပ်ထဲက ဖတ်ရတာပါ။ ကျနော်ကြိုက်လို့ ကျက်ထားတာပါ။
တာရာမင်းဝေရဲ့ ကဗျာလေးပါ။မျှဝေ ခံစားနိုင်အောင် တင်လိုက်ပါတယ်ဒ
Posted by puluque at Saturday, May 26, 20070comments Links to this post
ငါဟာ ....ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ဖြစ်လျင်
memory က 1G, hard disk က 250 GB, CPU က 3.0F ,casing box လှလှလေး ,19" LCD
ငါဟာ ....ကားတစ်စီး ဖြစ်လျင်
ှုISUZU DOUBLE CAB 4WD
ဒီကဗျာလေးက ကျှန်တော်4th year တုန်းက အစ်ကိုတစ်ယောက်စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာဖတ်ခဲ့တာပါ။
မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ)ရဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ပါ။
Posted by puluque at Thursday, May 24, 2007 1 comments Links to this post
ဟို တနေ့ ကအိမ်မှာ စီဒီတွေပြန်ဖွင့်ရင်း ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေပြန်ကြည့်မိတရ်၊ သူများရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ။ ကျောင်းတုန်း က ပုံလေးပါ။ ၂၀၀၄လောက်က ပေါ့။ ဒီအပင်ကြီး ကပုံထဲ ကအတိုင်းတော့ မဟုတ်တော့ဘူး။ ၂၀၀၆ လောက်က မုန်တိုင်းစာမိသွားပြီး တ၀က်လောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ သတိတရပေါံ.
Posted by puluque at Wednesday, May 23, 2007 1 comments Links to this post
ဒီနေ့မြန်မာစာ စမ်းရေးခြင်းပါ။နောက်ဆိုမြန်မာ လို ရေးတောမရ်။ကျနော့ မြန်မာစာရေးtyping က အရမ်းနှေးတာဗျ။ ကြိုးစားပြီးရေးပါမရ်၊
Posted by puluque at Wednesday, May 23, 20072comments Links to this post
Posted by puluque at Tuesday, May 22, 20070comments Links to this post
Our university logo
this is the logo of our university. This is the only university which has no student. But all of our students love her.
gmail and burma
u can use gmail by the following link
gmail open it. but i cannot find the gtalk link.
they dont banned it.
u dont need freedom. very nice
This is my first post of my blog.Later i will post new articles.
Posted by puluque at Monday, May 21, 20077comments Links to this post
သမ္မတ အိမ်တော်က ထွက်ခွာချိန်မှာ ယူသွားစရာဆိုလို့ ကျ...
ဘာညာ ဘာညာ ဒီနေ့မြန်မာစာ စမ်းရေးခြင်းပါ။နောက်ဆြို...
Our university logo this is the logo of our univer...